वाटरप्रूफ स्मार्टफोनहरू, वास्तवमै? | Androidsis
वाटरप्रूफ स्मार्टफोनहरू, वास्तवमै?
राफा रोड्रिगिज ब्यालेस्टेरोस | | मोबाईलहरू, हाम्रो बारेमा
हाल स्मार्टफोनको लगभग सबै ब्राण्डसँग बिक्रीको लागि पानीको प्रतिरोधसहितको एक फोन मोडेल छ मुख्य आकर्षण को रूप मा। वा एक क्वालिटीको रूपमा जसले उपकरणमा अधिक गुणस्तर र प्रतिरोध प्रदान गर्दछ। वास्तवमा, यो कुरा थाहा पाएर कि हाम्रो फोनले तरल फ्याँकाहरूको प्रतिरोध गर्दछ मानसिक शान्ति हो।
एक भन्दा बढी अवसरहरूमा, हाम्रो स्मार्टफोनले अप्रत्याशित अन्डरवाटर डाइभको कारण यसको दिनको अन्त्य देखेको छ। वा पानी वा अन्य तरल पदार्थहरूको साथ स्प्ल्याश गरेर। तसर्थ, जब हामी एक विज्ञापन देख्छौं जसले हाम्रो स्मार्टफोनलाई तरल पदार्थ वा स्प्लासले क्षति पुर्‍याउँदैन भनेर आश्वासन दिन्छ, यसले हाम्रो ध्यान खिच्छ।
1 एक स्मार्टफोनको पानी प्रतिरोधमा कत्तिको सत्यता छ?
2 आईपीको प्रमाणीकरणले पानीको लागि यसको प्रतिरोध मापन गर्दछ।
एक स्मार्टफोनको पानी प्रतिरोधमा कत्तिको सत्यता छ?
हाम्रो हातमा एउटा स्मार्टफोन रहेको जुन जलविरोधक हो, हामीसँग गाह्रो समय छ। अझ जब यी वाटरप्रूफ उपकरणहरू प्रत्येक फर्मको उच्च श्रेणीको बीचमा हुन्छन्। त्यसकारण, औसतमा लगभग hundred सय यूरो खर्च गर्दै, र नयाँ स्मार्टफोनलाई ट्यापमुनि राख्छ यदि यो प्रतिरोध गर्छ भने पूर्ण रूपमा सुरक्षित देखिदैन।
तर त्यसो भएमा, स्मार्टफोनले पानीको प्रतिरोध गर्दछ, र त्यसैले यो ठूलो धूमधामको साथ घोषणा गरियो। हामी किन यसलाई भिजाउने हिम्मत गर्दैनौं? किनभने त्यहाँ केही ब्रान्डहरू छन् जसको वारंटीले प्रतिक्रिया गर्दैन यदि उपकरणमा तरल क्षति छ। हो, पानीको प्रतिरोध गर्ने स्मार्टफोनलाई यदि यो भिजेको छ भने क्षतिग्रस्त भयो भने प्रतिस्थापन गरिएको छैन। हामी यो के भन्न सक्छौं? हामी धेरैका बारे सोच्न सक्छौं, तर एकदमै कम्तिमा यो अलि भ्रमपूर्ण देखिन्छ।
स्पष्टीकरण विभिन्न प्रकारको आईपी प्रमाणीकरणमा पाउन सकिन्छ। स्मार्टफोनले प्राप्त गरेको प्रमाणीकरणको प्रकारमा निर्भर गर्दछ, यसले फ्याँकिएको पानी वा लामो समय सम्म विसर्जन गर्न सक्छ। यसका लागि प्रत्येक उपकरणको आईपी प्रमाणपत्रका विवरणहरू जान्नु यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ.
हामी विज्ञापन द्वारा टाढा हुन सक्दैन। फोनहरू जुन पोखरीको फेदमा खस्दछ र केही गर्न नसक्ने गरी काम गर्न जारी रहन्छ। वा व्यक्ति जो वर्षामा आफ्नो स्मार्टफोनसँग कुराकानी बिना चिन्ता गर्दछ। हाम्रो उपकरणले के कस्ता परीक्षणहरू पार गर्यो भनेर जान्नु र तरलहरूसँग यसको सम्बन्धमा सीमितताहरू जान्नु महत्त्वपूर्ण छ।
आईपीको प्रमाणीकरणले पानीको लागि यसको प्रतिरोध मापन गर्दछ।
El प्रमुख समस्या तरल क्षतिको बिरूद्ध ग्यारेन्टी दावी गर्दा दिइन्छ यो कसरी भयो भनेर प्रमाणिकरण गर्नमा कठिनाई। यद्यपि हामी व्याख्या गर्दछौं कि उपकरणको दुरुपयोग भएको छैन। र यदि यो सत्य हो र हामीले निर्माताको सल्लाहलाई अनुसरण गरेका छौं। व्यावहारिक रूपमा यो नियम वा सल्लाह पूरा भएको छ भने थाहा छैन।
यी मोबाईलहरू विभिन्न प्रकारका तरल प्रतिरोध प्रमाणपत्रहरूका साथ प्रसारित हुनु अघि यो सजिलो थियो। तरल सेन्सरहरू जुन प्रत्येक उपकरणले समावेश गरेको थियो दुरुपयोगको एक स्पष्ट प्रतीक थियो। अब यो प्रमाणित गर्न गाह्रो हुँदै गइरहेको छ कि प्रत्येक उपकरण वा निर्माताको विवरणहरू पूरा भएको छ।
तपाइँलाई यो पनि थाहा हुनुपर्दछ कि त्यहाँ आईपी प्रमाणपत्रहरू छन् जुन केवल र केवल विशेष रूपमा पानी छहल्ने लागि सेवा गर्दछ। त्यो हो तपाईको स्मार्टफोन "वाटरप्रूफ" भए पनि, यदि यो सोडाले गीला भयो भने यो ग्यारेन्टी बाहिर हुनेछ। वा यदि छिटो पानीको सट्टा नुनिलो पानीको साथ गरिन्छ। त्यहाँ डुब्न छ वा चलिरहेको पानी मुनि राखिएको छ कि त्यहाँ मतभेदहरू छन्, जस्तै खुला ट्याप।
त्यसैले एक जलरोधक स्मार्टफोन को रूप मा आकर्षक तपाईं लाग्न सक्छ, यो तपाइँको खरीद को एक मात्र कारण छैन। आजसम्म, कुनै स्मार्टफोन छैन जुन यसको कसलाई एक सय प्रतिशत ग्यारेन्टी गर्दछ। न यो कि यो कुनै प्रकारको प्रतिबन्ध वा यसको निर्माताहरुबाट "सल्लाह" बिना पनडुब्बी छ।
त्यसोभए यदि तपाईंले एक स्मार्टफोन प्राप्त गर्ने निर्णय गर्नुभयो जुन पानीको प्रतिरोध गर्ने वाचा गर्दछ, यसलाई परीक्षणमा नलगाउनुहोस्। यो प्रयोगकर्ताको लागि सुरक्षित छ कि हामीले प्रयोग गरेको उपकरणसँग बढी सुरक्षा उत्तम हुन्छ। तर यसको हेराईबाट, तपाईंको स्मार्टफोन "जलीय" भए पनि यसलाई पानीबाट टाढा राख्नु राम्रो हुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » वाटरप्रूफ स्मार्टफोनहरू, वास्तवमै?
जोस फ्रान्सिस्को भन्यो
जोखिम नम्बर एक शौचालयको कचौरामा खस्दै छ; यूरिक एसिड, यूरिया र खनिज लवणको साथ पानीमा के हुन्छ। त्यसोभए त्यहाँ बाथटब र पौंडी पोखरीमा खस्ने जोखिम छ; त्यसैले दोस्रो अवस्थामा फोनको परीक्षण क्लोरीनयुक्त पानीमा २. meters मिटरको गहिराई र आधा दर्जन अन्य कम्पोनेन्टहरूमा गरिनु पर्छ जुन पौंडी पोखरीमा फ्याँकिएको छ। अन्य जोखिमहरू उथलपुट्टे समुद्री पानीमा खसिरहेका छन्, वर्षामा कुरा गर्दै छन्, सफ्ट ड्रिंकहरू स्पिल गर्दै छन् ... सायद आईपी टेस्टहरू दैनिक अभ्यासको लागि सहि छैनन्। वास्तविक जोखिमहरू प्रमाणित गर्ने धेरै परीक्षाहरू सिर्जना गर्न आवश्यक पर्दछ। निर्माताहरूले हामीलाई भन्दछन् कि यो केही समयको लागि डुब्न सकिन्छ, तर वास्तविकता यो हो कि हामीलाई फोनहरू आवश्यक पर्दैन, उदाहरणका लागि, लगभग शुद्ध H2,5O मा आधा घन्टाको लागि १.२ मिटर। हामीलाई उनीहरूको वास्तविक जोखिमका लागि टेलिफोन निर्माण गर्न आवश्यक छ र यसको लागि हामीले वास्तविक प्रयोगको लागि उपयुक्त मानकहरू सिर्जना गर्नुपर्नेछ।
होसे फ्रान्सिस्कोलाई जवाफ दिनुहोस्
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S8 का लागि नयाँ केस र सामान फुटेको छ
Gmail मा Google कुरा जून २ 26 मा बन्द हुनेछ